Irkutsk State University - Esi Higher Education na Russia
acronym : OKWU
Students (ihe ruru.) : 18000
Echefukwala discuss Irkutsk State University
Irkutsk State University e hiwere na October 1918 in Irkutsk.
Naa Irkutsk State University bụ nnukwu na nkà mmụta sayensị na izi alụmdi ọzụzụ ụmụ akwụkwọ na Humanities, eke, ọrụaka ma etinyere Sciences. ISU ụlọ ọrụ na-agụnye 7 agụmakwụkwọ njikọ, 10 ikike iche, 1 Alaka Bratsk, ndị ọkà mmụta sayensị Ọbá akwụkwọ ahụ bụ otu n'ime ndị kasị ibu University ọba akwụkwọ na Russia. ISU awade okokporo, nwe-, post-gụsịrị akwụkwọ na mmemme n'ihi na ihe karịrị 18000 ụmụ akwụkwọ ahụ na-enwe ohere na-ipuiche n'okpuru nlekọta nke ụwa a maara ndị ọkà mmụta sayensị.
Tinyere ihe ndị ọzọ ụlọ ọrụ Irkutsk State University nwere Center maka Advanced ọzụzụ na mmughari, 3 nnyocha institutes, N'etiti ógbè Institute of Social Sciences, Center n'ihi na New Information Technologies, Baikal Research na Education Center, ngalaba maka post-gụsịrị akwụkwọ na doctoral ọmụmụ, na nkà mmụta sayensị ọba akwụkwọ, nkà mmụta mbara igwe Observatory na Botanic ubi.
The University ezi ikike iche na òtù na-dị na 9 izi ụlọ ke Irkutsk na na Bratsk. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị a ụlọ ndị dị oké akụkọ ihe mere eme na ụkpụrụ ụlọ uru. Ha na ha azụ nke 18-nke 19 na narị afọ. Senior ụmụ akwụkwọ niile ka ikike iche nwere pụrụ iche ọmụmụ na ụwa na laboratories na nnyocha sayensị oru nke ISU na Siberia Alaka nke Russian Academy nke Sciences.
ruo ọtụtụ iri afọ, Irkutsk University zụrụ karịa 80 puku ukwuu ruru eru ọkachamara, ma ama ndị ọkà mmụta sayensị, nkụzi, dere, na statesmen, gụnyere State Nrite mmeri na ama nkà dere V. Rasputin, A. Vampilov, na M. Sergeev.
N'agbanyeghị ebe ihe ndị dị anya site na isi obodo nke Russia, Moscow, Irkutsk na Irkutsk Oblast, a ọmarịcha ógbè nke mba, Otú o sina nwere a ọgaranya akụkọ ihe mere eme, Siberian ihu igwe, na oké ohere ịga na ụmụ akwụkwọ na ndị bi na myiri.
1. The Irkutsk Oblast dị na obi Siberia. Isi obodo ya bụ obodo nke Irkutsk. The anya si Moscow na Irkutsk bụ puku mmadụ ise nte kilomita. The Oblast kwubara 6 si na 20 ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ógbè ke Siberia na okwu nke ebe. N'ọdụ ụgbọ arụ mba ọnọdụ na njikọ ọtụtụ dị nso mba.
2. The akụkọ ihe mere eme nke Irkutsk Oblast-ewe ya mmalite na 1682 mgbe Domain (Voivode) nke Irkutsk e guzobere nke e wee restructured n'ime a n'ógbè ke 1719. Na dum nke Oblast, enwere 2.700.000 bi aza ajụjụ maka 30% nke ndị nile bi n'ime Eastern Siberia. Bụ isi obodo nke a n'ókèala bu obodo Irkutsk, hiwere na 1661, na ịnọgide na-enwe n'oge a karịa 600,000 ndị mmadụ.
3. The Irkutsk Oblast e ji dị ka ndị nwere a sharply continental idụhe na nnọọ ogologo ma na oyi na-atụ winters na obere ikuku ọdịda. Otú o sina, na summers bụ ndị na-ekpo ọkụ ma na iru mmiri. The nkezi kwa afọ okpomọkụ anaghị excede 0ºC n'ebe ọ bụla Oblast.
Na coldest ọnwa nke oyi, January, na ọnọdụ okpomọkụ àmà site -20 ka -50ºC. na July, ndị kacha bụrụ ezigbo ọnwa, nkezi okpomọkụ na-+ 18ºC na a kacha okpomọkụ nke + 37ºC. Ndị fọdụrụ n'ezinụlọ oge bụ oyi, -adịgide adịgide on nkezi 180-200 ụbọchị. Karịsịa n'oge oyi otú i nwere ohere pụrụ iche nke na-atụgharị uche ma na-enwe na oyi na ịma mma nke obodo, region, na Baikal. Banyere ọnụ ọgụgụ nke anwụ na-acha ụbọchị, Irkutsk na akụkụ ebe ndịda nke Oblast bụ nke yiri Southern California, nkezi 300 ụbọchị nke anwụ kwa afọ.
4. Irkutsk taa bụ isi ulo oru, agụmakwụkwọ, na omenala n'etiti. Obodo na pụtara nke ọma nsogbu na bịara n'ikperé mmiri nke Angara osimiri, 65 km si ọdọ Baikal.
Irkutsk bụ n'ụlọ ka otu n'ime alaka nke Scientific Academy, ịnọgide na-enwe asatọ institutes nke sayensị. E nwere iri mahadum, iri isii na asatọ ọba akwụkwọ, iri asatọ na ụlọ akwụkwọ, a ejije nkiri, musical nkiri, popet nkiri, ụmụ nkiri, ngwa nnukwu ọnụ ụlọ, ntụrụndụ venues, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ọtutu cafes, niile dị na Irkutsk.
Faculty of Philology na Journalism
1930 Reorganization of the university: nkà mmụta ọgwụ, finance-economics, and pedagogy institutes were founded.
1959 Computer center equipped with an electronic computing machine (ECM) e mepere.
2011 OKWU, along with 55 other universities in Russia, won the contest organized by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation for the support of programs for the strategic
mmepe. The program provided support for scientific research and creation of a scientific-education complex in conjunction with the institutes of the Irkutsk scientific center
Ị chọrọ discuss Irkutsk State University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Irkutsk State University ukara Facebook
Moscow State Iwu University Moscow